नियमित कारोवारका लागि नेप्सेमा एक करोड कित्ता सेयर सुचीकरण
काठमाडौं, १२ फागुन । नियमित कारोवारको लागि नेप्सेमा बिहिबार आधा दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरुको एक करोड कित्ता भन्दा बढी सेयर सुचीकृत भएकाछन् । नेप्सेका अनुसार आज टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकको यसअघि प्...
नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुबैमा गिरावट – तालिकासहित
काठमाडौं, १० फागुुन । साताको तेस्रो कारोवार दिन नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबैमा गिरावट देखिएको छ । अघिल्लो नेप्से घटेर कारोवार रकम बढेको भएपनि आज मंगलबार भने दुुबै नै घटेको छ । नेप्से आज सात दस...
नेप्सेमा सामान्य गिरावट, कारोवार रकममा भने उच्च बृद्धि – तालिकासहित
काठमाडौं, ९ फागुन । साताको दोस्रो कारोवार दिन आज सोमबार नेप्सेमा सामान्य गिरावट देखिए पनि कारोवारमा रकममा भने उच्च बृद्धि देखिएको छ । नेप्से आज चार दमसलव २४ अंकले घटेर १३ सय ६५ दसमलव ११ अंकमा कायम ...
एनसीसी बैंक काण्ड : अधिकांस व्यवस्थापन प्रमुख घोटालामा संलग्न ! बैंकको अवस्था दयनीय
बैंकिङ समाचार अर्थ व्यूरो, काठमाण्डौ, ९ फागुन । केही समयअघि मात्र चार वटा बिकास बैंकहरुलाई गाभेर एकीकृत कारोवार सुरु गरेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकको अवस्था निकै नै दयनीय देखिएको छ । बैंकमा ह...
क्यापिटल मर्चेन्ट ठगी प्रकरणका फरार प्रतिवादी पक्राउ
काठमाडौं, ८ फागुुन । केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो ९सिआईबी० ले क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड ठगी प्रकरणका अर्का एक फरार प्रतिवादी मदन बहादुुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । सिआईबीले फरार प्रत...
नेप्सेमा पहिलो दिन नै उत्साह, नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै बढ्यो – तालिकासहित
काठमाडौं, ८ फागुुन । साताको पलिलो कारोवार दिन आज आईतबार नै नेप्सेमा उत्साह थपिएको छ । सुरुवाती दिनमा नै नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै बढेको छ । आज नेप्से २५ दसमलव पाँच अंकले बढेर १३ सय ६९ दसमलव...
घाटाको व्यापार आखिर कहिलेसम्म ?
काठमाण्डौ,८ फागुन । मुुलुकमा व्यापारघाटाको अवस्था निकै नै कहालीलाग्दो दिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३—०७४ को छ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४ दसमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब २७ करोड पुगेको जानकारी न...
यी हुन लगानी डुबाउने कम्पनी
काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अहिलेसम्म दुई सय २१ कम्पनी सूचीकृत रहेकोमा ७० भन्दा बढीको कारोबार हुँदैन । तिनीहरुमध्ये कतिपय नेप्सेको सम्पर्कमै छैनन् भने केहिले नवीकरण शुल्क नबुझाएको कारण ...